စကြဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်မနေသိထားသင့်သော အချက် ၁၀ ချက် – Curiosity
Home /စကြဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်မနေသိထားသင့်သော အချက် ၁၀ ချက်
Antimatter ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့လူတိုင်း မြင်ဖူးကြားဖူးကြတဲ့ matter တွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် တွေကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိတဲ့ electron ဟာ လျှပ်စစ်အနေနဲ့ဆိုရင် အမဒြပ်ကို ဆောင်ပြီးတော့ သူနဲ့ အစစအရာရာ ထုထည်၊ အလေးချိန်အကုန်တူပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ် အဖိုဒြပ် ဆောင်တဲ့ အမှုန်ရှိပါတယ်။ သူကတော့ positron လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Matter နဲ့ antimatter တို့အဟာ အချင်းချင်း ထိမိတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဓာတ်ပြုခြေဖျက်(annihilate) သွားနိုင်ကြပြီး အိုင်းစတိုင်းရဲ့ E=mc^2 အရ တကယ်သန့်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင် (positive energy) အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များအရ အနာဂတ်က အာကာသယာဉ်များဟာ ဒီ matter နဲ့ antimatter တို့ ဓာတ်ပြုလို့ဖြစ်လာမယ့် pure energy ကို အသုံးပြုပြီး မောင်းနှင်သွားမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
Futuristic Spaceships that is operated on Anti Matter
2. အသေးစား တွင်းနက်လေးများ
အခုလက်တစ်လောက အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ braneworld သီအိုရီသာမှန်ကန်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ စကြဝဠာထဲမှာ အက်တမ်တစ်လုံးရဲ့ နျူကလိယပ်စ် အရွယ်အစားသာရှိနိုင်တဲ့ အသေးစားတွင်းနက်ငယ်လေးများ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာတို့ သိရှိပြီး အတည်ပြုထားပြီးသာ တွင်းနက်များနဲ့ မတူတဲ့အချက်ကတော့ သူတို့ဟာ မဟာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရပ် (big bang) ရဲ့ လက်ကျန်များဖြစ်ကာ သူတို့ရဲ့ ပဥ္စမမြောက်ဒိုင်မေးရှင်းများနဲ့ ဆက်နွယ်နေတာကြောင့် space-time ကို အများနဲ့မတူပဲ သီးခြားစွာ သက်ရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
3. နောက်ခံ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်
CMB လို့ အတိုကောက်ခေါ်ပြီး Cosmic Microwave Background လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒါဟာ မဟာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရပ်ရဲ့ လက်ကျန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များမှာ ရေဒီယိုအနှောက်အယှက်(radio noise) တစ်ခုအနေနဲ့ ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ CMB ဟာ မဟာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး သက်သေတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံပြီးမြင်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး စမ်းသပ်မှုများအရ -270 Celsius (absolute zero temperature) အထိ သူ့ကို ထားနိုင်ပါတယ်။
Original Photograph of Comic Microwave Background
အမှောင်ဒြပ်ထုများ(dark matter) ဆိုပေမယ့်လဲ သူတို့ဟာ အမည်းရောင်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ဘာလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် နာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို တိုက်ရိုက်ထောက်လှမ်းလို့မရပဲ စကြဝဠာရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ကို သူတို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုပြောနိုင်သလဲဆိုတော့ စကြဝဠာရဲ့ ဒြပ်ထုဟာ ကျွန်တော်တို့ မြင်နိုင်တဲ့ matter များအားလုံးရဲ့ ဒြပ်ထုထက် ပိုနေပါတယ်။ dark matter ရဲ့ candidate တွေထဲမှာတော့ နျူထရီနို များကစလို့ တွင်းနက်များအထိ ပါပါတယ်။ ဒီ dark matter များကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများ ခေါင်းကိုက်ကြပြီးတော့ gravity အကြောင်းကို ဒီထက်ပိုပြီးနားလည်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို ရှင်းပြနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
5. ပြင်ပ ဂြိုဟ်များ
Exoplanets များလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ မတိုင်ခင်အထိ ကျွန်တော်တို့ဟာ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းက ဂြိုဟ်များကိုသာ သိရှိထားပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ နေအဖွဲ့အစည်းပြင်ပက ဂြိုဟ်များ (exoplanets) ထောင်ချီတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဝတ္ထုများထဲကအတိုင်း လူသားများနေနိုင်မယ့် ပြင်ပဂြိုဟ် (second earths) များကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဂြိုဟ်များကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာပေါ်ကနေ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေး နည်းပညာများကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Artistic Illustration of Exoplanets
Gravitational Waves များကိုတော့ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ နှိုင်းရသီအိုရီထဲမှာ ပထမဆုံး စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အလင်းအလျင်နဲ့ ရွေ့လျားကြပြီးတော့ အလွန်အင်မတန်အားနည်းတာကြောင့် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့ အာကာသဖြစ်စဉ်များမှာသာ ထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲမှာတော့ LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) က ထောက်လှမ်းမိပြီးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀၀ က စာရွက်၊ ခဲတံနဲ့ ခေါင်းကိုသာအသုံးပြုပြီး ခန့်မှန်းပြခဲ့တဲ့ အိုင်းစတိုင်းကို အားလုံး အံ့သြ ခဲ့ကြပါတယ်။
Illustration of Gravitational Wave
Galactic Cannibalism လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က သက်ရှိများလိုပဲ စကြဝဠာထဲက ဂလက်ဆီများဟာ အချင်းချင်း ဝါးမြိုတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Andromeda ဂလက်ဆီဟာဆိုရင် အခု သူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ ဂလက်ဆီတစ်ခုကို ဝါးမြိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နောက်နှစ်ပေါင်း ၃ ဘီလီယံလောက်မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာ နဂါးငွေတန်းဂလက်ဆီကို ဝါးမြိုဦးမှာဖြစ်ပြီးတော့ ထိုဖြစ်ရပ်ဟာ နှစ်ပေါင်း သန်းချီပြီးတော့ ကြာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင် ကမ္ဘာရဲ့ ညကောင်းကင်ကြီးဟာ အခုထက် ကြယ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာကို ပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ အမြဲတန်း လင်းလက်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမရှိတော့မှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။
နျူထရီနိုများဟာတော့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအရ neutral ဖြစ်ပြီး ဒြပ်ထုအလွန်နည်းတဲ့ အမှုန်များဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လဒ် (Lead) အထဲမှာကို မိုင်ပေါင်းများစွာ ယိုင်ယဲမှုမရှိပဲ သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဟာဆိုရင် သင်အခုဒီစာကို ဖတ်နေစဉ်အတွင်းမှာကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ မီးလောင်မှုများရဲ့ အတွင်းကဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီးတော့ သေဆုံးဆဲ ကြယ်များရဲ့ ဆူပါနိုဗာ ပေါက်ကွဲမှုများကလဲ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ Neutrino-detecting project အဖြစ် အခုပြုလုပ်နေပြီး ထောက်လှမ်းကရိယာများကို မြေအောက်၊ ပင်လယ်များအောက် နဲ့ ရေခဲတောင်များအောက်မှာ ထားရှိထားပါတယ်။
Neutrinos and its Detector
ကွာဆာများဟာ စကြဝဠာများအတွင်းမှာ အလင်းလက်ဆုံးအရာများဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ စကြဝဠာဖြစ်ပေါ်စအချိန်မှာဆိုရင် နေရာတိုင်းမှာ သူတို့ ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ ကွာဆာများက ထုတ်လွှတ်တဲ့ စွမ်းအင်ဟာ ဂလက်ဆီများ ရာချီစုပေါင်း ပြီး ထုတ်လွှတ်တဲ့စွမ်းအင်ထက် ပိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တောက်ပမှုဟာ နေပေါင်း ဘီလီယံချီပြီးတောက်ပမှုထက် ပိုပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံကတော့ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ကို Quasar 3C 273 လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။
Actual Photograph of Quasar 3C 273
ကွမ်တမ်သီအိုရီအရ အက်တမ်အောက်သေးငယ်တဲ့အမှုန်များ ဘီလီယံများစွာ မွေးဖွားပြီး ပျက်စီးနေတဲ့ လေဟာနယ်များ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ စကြဝဠာအတွင်း ကုဗစင်တီမီတာ တိုင်းအတွင်းမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ နှိုင်းရသီအိုရီများအရ Gravity ဟာ ဆွဲငင်ပြီးတော့ ဒီ လေဟာနယ်စွမ်းအင်ခေါ် negative gravity ကတော့ အားလုံးကို တွန်းကန်စေပါတယ်။ သူဟာ စကြဝဠာပြန့်ကားနေခြင်းရဲ့ သော့ချက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ သူက gravity ကို ကြီးစိုးသွားရင် စကြဝဠာကြီးဟာ ထာဝရ ဝေးသထက်ဝေးအောင် ပြန့်ကားသွားပြီး အေးခဲကာ Big Freeze နဲ့ အဆုံးသတ်သွားပါမယ်။ Gravity က လေဟာနယ်စွမ်းအင်ကို ကြီးစိုးလိုက်ရင်တော့ စကြဝဠာကြီးဟာ တစ်ဖန်ပြန်ကျံု့လာပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာ Big Crunch နဲ့ အဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
TAGS: Articles astronomy earth facts physics Planetary Science science space technology tharhtetaung